Islamic State နယ်မြေထဲသို့ ခရီးတစ်ခေါက် (ရုပ်သံ) – International War News Journal
Islamic State နယ်မြေထဲသို့ ခရီးတစ်ခေါက် (ရုပ်သံ)
Posted on February 3, 2016 February 3, 2016 by MMAGTECH
*(This video require Facebook login.)
“Islamic State (ISIS) နယ်မြေထဲသို့ခရီးတစ်ခေါက်”
ယခုခရီးစဉ် “Islamic State (ISIS) နယ်မြေထဲသို့ခရီးတစ်ခေါက်” မှာ VICE သတင်းဌာနမှ အစ္စလမ်ဘာသားရေးနယ်မြေဟု ကြွေးကြော်ထားသည့် အစ္စလာမ်းမစ် နယ်မြေထဲသို့၃ ပတ်သွားရောက် ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) အီရတ်နှင့်ဆီးရီးယားရှိ အစ္စလာမ်းမစ် နယ်မြေသို့ ဝင်ရောက်ရန် ပထမခြေလှမ်းမှာ မအောင်မြင်ခဲ့ချေ။ ဒုတိယတစ်ခေါက် ထမ်မံကြိုးစားမှုကြောင့် ပထမဆုံး စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို အောင်မြင်စွာကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီး သတင်းများကို ရယူနိုင်ခဲ့သည်။
ပထမဦးဆုံးမှာ အစ္စလာမ်းမစ်နယ်မြေကို အဖွဲ့ ၃ ခုဖြင့် ဖွဲ့ စည်းခဲ့ကြသည်။ ပထမအဖွဲ့ မှာ အီရတ်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့ မှာ အီရတ်နိုင်ငံရှိ ယခင်စစ်မှုထမ်းဟောင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ဒုတိယအဖွဲ့ မှာ အလ်ကိုင်ဒါအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး တတိယအဖွဲ့ မှာ Abu Omar al-Shishani ခေါင်းဆောင်သည့် လူငယ်အုပ်စုတို့ ဖြစ်ကြသည်။
အထက်ပါအကြောင်းအရာများနှင့် သတင်းအပြည့်အစုံကို ယခုလို နိုင်ငံတကာစစ်သတင်းဂျာနယ်မှ စီစဉ်တင်ဆက်မှုဖြင့် ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါပြီ။
Refernece & Video by #VICE
Translating by #WHISKEY and Reporting by #AJAX
Exclusively in Myanmar-Language @ International War News Juornal.
Official website – https://azlgroup.wordpress.com
← အမေရိကန်နိုင်ငံရေတပ်၏ နောက်ဆုံးပေါ်လက်နက် (ရုပ်သံ)
ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှ အစာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုများ (ရုပ်သံ) →
From grin to grim: Inside the Trump-Kim summit collapse - CNN May 24, 2018
CNNFrom grin to grim: Inside the Trump-Kim summit collapseCNNWashington (CNN) The sun was setting, dinner was waiting and President Donald Trump was making the short walk to his private residence when, on March 8, he suddenly madeadetour to the press briefing room. Peeking throughahalf-opened pocket door ...Trump Pulls Out of North Korea Summit Meeting w […]
Investigators say Russian missile downed MH17 over Ukraine in 2014. Moscow calls conclusions 'fakes' - Los Angeles Times May 24, 2018
Los Angeles TimesInvestigators say Russian missile downed MH17 over Ukraine in 2014. Moscow calls conclusions 'fakes'Los Angeles TimesAn international group of investigators said Thursday that its four-year probe found "legal and convincing evidence" that the missile that shot down Malaysia Airlines Flight 17 over Ukraine belonged to the […]
Business InsiderThere are no winners in Trump's economy, only non-losers and big losers who are getting clearer by the dayBusiness InsiderPresident Donald Trump (C), flanked by first lady Melania Trump (L), delivers remarks before dinner with Indian Prime Minister Narendra Modi at the White House June 26, 2017 in Washington, DC. Trump and Modi met earli […]
China Is Building Towns in the South China Sea That Could House Thousands of Marines - Yahoo News May 24, 2018
New York PostChina Is Building Towns in the South China Sea That Could House Thousands of MarinesYahoo NewsSubi, one of China's seven man-made islands in the South China Sea, now hosts 400 individual buildings that could housearegiment of the People's Liberation Army, images show. The high-resolution pictures obtained by DigitalGlobe satellite an […]